Santa Claus kushongedza yako Kisimusi muti ne eva furo Mhizha On
Santa Claus yekushongedza muti wako weKisimusi neeva rabha
DonluMusical | | Akisimusi emaoko, Humba Dzemhizha
Santa claus kana santa claus Ndiye mumwe wevanonyanya kuzivikanwa vanhu veKisimusi. Anotiunzira zvipo musi waZvita 24 uye akanaka kuvana. Mune ino posvo ini ndiri kuenda kukudzidzisa iwe maitiro ekuita izvi chishongo muchimiro chaSanta Claus kushongedza muti wako.
1 Zvishandiso zvekugadzira iyo Santa Claus chishongo
2 Maitiro ekugadzira chishongo chaSanta Claus
Zvishandiso zvekugadzira iyo Santa Claus chishongo
Blush kana eyeshadow
Cotton swab uye skewer tsvimbo kana awl
Zvinhu zvidiki zvekushongedzwa
Maitiro ekugadzira chishongo chaSanta Claus
Kutanga cheka ruva nedenderedzwa uchishandisa vanocheka kuki. Iwe unogona kuzviita muhukuru hwaunofarira zvakanyanya uye kugadzirisa kune zvaunoda. Kana iwe usina macheki macheki unogona kuzviita neruoko, hazvina basa kana zvakakwana.
Gira musoro pachigamba chichena, rinova bvudzi raSanta nendebvu.
Kuumba ngowani isu tichazoda zvidimbu zvitatu: iyo tsvuku chikamu, chena chikamu uye pombi. Namatidza chidimbu chichena pamusoro peiyo tsvuku uye woisa pom pom pamucheto weheti.
Ipapo chiise pamusoro wako zvehunhu hwedu.
Zvino regai shongedza kumeso. Kutanga, ita denderedzwa neburi punchi kuti riumbike mhino, cheka masharubu uye gadzirira maziso maviri enhare.
Namatidza maziso kumeso, ipapo masharubu uye pakupedzisira, mhino.
Shandisa eyeshadow kana kutsvuka uye nekotoni swab kuti upe ruvara kumatama. Zvino, ine mucherechedzo, gadzira eyelashes.
Tsiye ichave zvidimbu zviviri zvevachena pombi yekuchenesa.
Kushongedza ngowani ini ndinoshandisa a green eva rubber sheet uye zvidimbu zviviri zvinopenya, unogona kusarudza zvaunazvo kumba.
Pamatama ane pendi chena ndiri kumupa imwe anopenya Dots kushandisa tsvimbo.
Ndangosara chete gadzira gomba kune ngowani kwandinoenda isa pombi yekuchenesa Ruvara rwesirivheri rwakamonyoroka kuitira kuti ruumbundike uye nokudaro runogona kuiswa nyore nyore kwese senge muti, musuwo kana chero kona yemba yako.
Uye voila, tapedza chishongo chedu cheSanta Claus, ndinovimba wakaifarira. Tokuona pane inotevera zano. Chisarai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Humba Dzemhizha » Santa Claus yekushongedza muti wako weKisimusi neeva rabha
Mavara akasarudzika kana ma tag ezvipo zveKisimusi
Maitiro ekugadzira muti weKisimusi kubva kuFimo kana polymer ivhu